Dowladda Maraykanka oo mar kale u hanjabtay Kuuriyada Waqooyi | SAHAN ONLINE
Dowladda Maraykanka oo mar kale u hanjabtay Kuuriyada Waqooyi
NEW YORK – Dowladda Maraykanka ayaa mar kale hanjabaad u dirtay dowladda Kuuriyada Waqooyi taasoo ah in la burburin doono haddii dagaal qarxo.
Safiiradda Maraykanka u fadhida Qaramada Midoobay Nikki Haley ayaa u digtay hoggaanka Kuuriyada Waqooyi.
Nikki Haley oo ka hadlaysay shir deg deg ah oo golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ku yeesheen magaalada New York ayaa ugu baaqday dhammaan dalalka caalamka in ay xiriirka diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi ee kala dhaxeeya Xukuumadda Pyongyang.
Waxay hadalkeeda ku dartay in Madaxweyne Trump uu horay ugu booriyay dhigiisa dalka Shiinaha in uu joojiyo saliidda ceyriinka ee uu Shiinaha u dhoofiyo dalkaas kaddib markii labada Madaxweyne ay kawada hadleen tijaabadii gantaal ee ay sameysay Kuuriyada Waqooyi.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa horay u sheegay in cunaqabayeun dheeraad ah lagu soo rogi doono Kuuriyada Waqooyi.
Kuuriyada Waqooyi ayaa shalay sheegtay in ay ku guulaysatay tijaabinta nooc cusub oo ah gantaallada ballistic loo yaqaanno ee qaaradaha isaga kala goosha,kaasoo gaari kara dhammaan qaaradda uu Mareykanku ku yaallo.